Xogtii Laga Xaday Safiirkii UK ee Maraykanka oo Kashiftay Sababta Trump Uga Baxay Heshiiskii Iiraan • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Xogtii Laga Xaday Safiirkii UK ee Maraykanka oo Kashiftay Sababta Trump Uga Baxay Heshiiskii Iiraan
July 14, 2019 - By: Horseed Team
Sababta uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uga baxay heshiiskii Nukliyeerka ee Iiraan ayaa lagu sheegay inay la xiriirtay inay doonayay oo kaliya inuu ku xumeeyo madaxweynihii hore ee Maraykanka Brack Obama
Sida ay daabacday jariidada Ingiriiska ee Daily Mail, xogihii laga jabsaday emialadii Safiirkii UK ee Maraykanka Sir Kim Darroch ayaa sheegaya in arrin shakhsiyadeed uu Trump uga baxay heshiiska Iiraan. Safiirka ayaa ku tilmaamay goaanka Trump burbur dimplamaasiyadeed.
Warqad lagala baxay emailada Safiirka ee la jabsaday ayuu safiirku u diray wasiirkii hore arrimaha dibada Uk Sir Boris Johnson oo isagu ka codsaday madaxweyne Trump inuusan ka bixin heshiiska Iiraan xiligan.
Waxyaabaha kale ee warqad ku qornaa waxaa ka mid ah in la Taliyayaasha ay ku kala qaybsanaayeen tallaabada laga qaadayo Iiraan, islamarkaana aynan Istaraatijiyad iyo qorshaha dejisanaa oo la ku saabsanaa ka bixitaanka Heshiiska Iiran.
Maraykanka iyo 4 Dal ee waaweyn ayaa Iiraan kula heshiiyeen inay hoos u dhigto bacraminta shidaalka Nukliyeerka, una ogolaato baarayaasha Caalamiga ah inay la socdaan howlaha ka socda warshada Nukliyeerka Iiraan, taas bedelkeeda laga qaado cunqaybtayntii saarnayd.
Dowlada Maraykanka iyo Midowga Yurub ayaa ku kala qaybsamay ka bixitaanka Heshiiska Iiran. Dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ayaa cambaareeyay goaanka Donald Trump. Sidoo kale waxaa meel xasaasi ah maraysa xiisada u dhaxaysa Maraykanka iyo Xulafada Sucuudigu hoggaamiyo oo dhinac ah iyo Dowladda Iiraan.